नेकपाको कम्युनिस्ट आन्दोलन- विचार - कान्तिपुर समाचार
नेतृत्वले आफ्ना अभिव्यक्ति र कर्ममार्फत सर्वांग उदांगो पारेर असलियत देखाइसक्दा पनि नेकपालाई सबैभन्दा अग्रगामी र प्रगतिशील पार्टी मान्नेहरुको संख्या ठूलो छ ।
असार १९, २०७७ उज्ज्वल प्रसाई
यस घडी नेपालको दलीय राजनीति केही थान कलाविहीन प्रहसन रचेर बसेको छ । यो स्तम्भ लेख्दै गर्दा काठमाडौंको माइतीघर मण्डला र झापाको बिर्तामोडमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पद जोगाउने घोषित उद्देश्यसाथ प्रदर्शन गरिँदै छ ।
नेपाली लोकतन्त्रको इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएका प्रधानमन्त्री र दलाध्यक्षको पद जोगाउन नियोजित सडक प्रदर्शन गरिएको हो । केही दिनदेखि विवादमा रहेका नागरिकता, अख्तियार एवं निजामती सेवासम्बन्धी ऐनको टुंगो नलगाई संसद्को बजेट अधिवेशन हठात् अन्त्य गरियो । अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) बारे अन्योल पनि नटुंग्याई अधिवेशन अन्त्य भयो । खास गरी केपी ओलीबाट असन्तुष्ट पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायत नेताले ओलीको प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा मागेसँगै सडकदेखि संसद्सम्मको प्रहसन सुरु भएको हो ।
नेकपा स्थायी समितिको छैटौं दिनको बैठक सुरु हुनुअघि बालुवाटार, शीतलनिवास एवं खुमलटारमा सत्ताकेन्द्रित रस्साकस्सीका पटके बैठक चले । यस्ता अनौपचारिक पटके बैठक वैचारिक वा सांगठनिक अड्चनका विषयमा छलफल गर्न आयोजना गरिँदैनन् । मूलतः शक्ति–अभ्यासमा देखापर्ने असहजतालाई लेनदेन वा जोडघटाउबाट मिलाउने यत्नमा भेटघाटका शृंखला रचिन्छन् । सके फकाएर लेनदेन मिलाउने, नत्र तर्साउने काम गरिन्छ । वैचारिक एवं सांगठनिक विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने औपचारिक स्थायी समितिको बैठकमा भने दलाध्यक्ष नै प्रायः गयल छन् । पटके छलफलमा सक्रिय रहने उनी स्थायी समितिमा छैटौं दिन पनि आएनन् । बरु छलफल स्थगित गरेर अन्य शीर्षस्थसँग फेरि पटके बैठकमा लागे । यसैबीच, दल–तोडक अध्यादेश ल्याएर राजीनामा माग्नेहरूलाई तर्साउने काममा उनी व्यस्त भएको हल्ला चल्यो ।
नेतृत्वले आफ्ना अभिव्यक्ति र कर्ममार्फत सर्वांग उदांगो पारेर असलियत देखाइसक्दा पनि नेकपालाई सबैभन्दा अग्रगामी र प्रगतिशील पार्टी मान्नेहरूको ठूलो संख्या छ नेपालमा । प्रत्येकपटक शक्ति–अभ्यासमा जटिलता उत्पन्न भएर नेताहरू आपसमा लड्न थालेपछि कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति भन्न थाल्छ, ‘नेताहरू हो, सच्चिनुहोस् । तपाईंहरू आपसमा लड्न थाल्नुभयो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन सर्वनाश हुन्छ ।’ नेकपालाई आफ्नो पार्टी ठान्ने नागरिक एवं सक्रिय कार्यकर्ताले सर्वनाश होला भनेर साह्रै धेरै चिन्ता गरेको ‘कम्युनिस्ट आन्दोलन’ आखिरमा हो के ? नेपालमा मौजुद रहेको भनिएको यो आन्दोलन सकिँदा खासमा के सकिने हो ? अहिले आपसमा लडिरहेका ती नेताले धानेर बसेको त्यो के हो जसलाई कार्यकर्ता कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्दै छन् ?
नेकपा समर्थकले भनेको स्विकार्ने हो भने, अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन हाँकिरहेको सबैभन्दा भरपर्दो पार्टी यही नेकपा हो जसले पछिल्ला निर्वाचनहरूमार्फत सबैभन्दा ठूलो जनसमर्थन प्राप्त गरेको थियो । त्यसो भए विशाल संगठन सञ्चालन गरिरहेको नेकपाले गरिरहेका कामहरूको एकसरो सूची बनाएर हेरौं र उसले गरिरहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बुझ्ने प्रयास गरौं । दस्तावेजमा लेखिएका शब्दले मात्र यथार्थ बताउँदैनन् भन्ने स्वयं दस्तावेजका असली लेखकहरूलाई थाहा छ । त्यसैले नेकपाको संगठन र त्यस संगठनमार्फत भइरहेका काम सम्झनु मनासिब हुन्छ ।
अहिले नेकपा सर्वत्र छ, मूलतः सत्तामा छ । सरकारमा नेकपा मात्रै छ, संसद्मा नेकपाको स्पष्ट बहुमत छ, प्रदेश सरकारहरूमा सबैभन्दा बढी उपस्थिति उसकै छ, स्थानीय सरकार लगभग सबै नेकपाकै हातमा छन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने दलीय युनियन हुन्, जसमा नेकपा नै अरूभन्दा अब्बल छ । प्रहरी र सेनामा समेत नेकपाको बलियो पकड छ, यो तथ्य छिपेको छैन । नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक काम गर्ने पत्रकारहरूमा बलियो प्रभाव भएको पार्टी नेकपा नै हो । व्यावसायिक भनिएका सञ्चारगृहदेखि पछिल्लो समय बग्रेल्ती खुलेका अनलाइनमा समेत नेकपा पत्रकारको बाहुल्य देखिन्छ । निजीदेखि सामुदायिक सबै शिक्षालयमा काम गर्ने शिक्षकहरूमा नेकपाको प्रभाव असाध्यै बलियो छ । विद्यार्थी संगठनमा नेकपालाई कसले भेट्ने ? गाउँस्तरका सहकारी समूहदेखि युवा क्लबहरूमा पनि नेकपाको जत्ति पकड कुनै दलको छैन । सामाजिक सञ्जालमा हल्ला मच्चाउन सक्ने झुन्डहरूमा सबैभन्दा सक्रिय नेकपा कार्यकर्ता नै हुन् ।
माथि उल्लिखित संगठनले गरिरहेका काम केके हुन् ? सूचनामा पहुँच राख्ने जोसुकैले यी संगठनले गरिरहेका काम बताउन सक्छ । सत्तामा बसेर नेकपाले आफ्ना वरपरका एक दर्जनजति दलालहरूको अकण्टक सेवा गरेको छ । ओम्नीदेखि गोकुल बाँस्कोटाको फोन–प्रकरण सम्झँदा मात्र काफी हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सत्ताधारी कम्युनिस्टले बजारको एकोहोरो सेवा गरेको छ । वार्षिक बजेटको एकसरो अध्ययन गर्दा नेकपाले सेवा गर्न खोजेको वर्गको नापनक्सा स्पष्ट हुन्छ ।
नेकपाको कर्मचारी संगठनले आफ्ना कार्यकर्ताको सरुवा र बढुवा, कमिसन र सुविधाजस्ता चासोमा सक्रियतापूर्वक काम गरेको छ । विद्यार्थी संगठन विश्वविद्यालय र कलेजका स्रोतमा दखल राख्ने ध्याउन्नमा सधैं सक्रिय रहेकै छ । गाउँ र नगरस्तरमा सक्रिय संगठनमा आबद्ध युवा गाउँका जंगल, खोला, बालुवा, गिट्टीलगायत स्रोत दोहन गर्ने र निजी सम्पत्ति वृद्धि गर्ने काममा दत्तचित्त छन् । वित्तीय कारोबारका वैध एवं अवैध कारबाहीमा पनि दलआबद्ध युवाहरू नै सामेल छन् । आफ्ना गुटका नेतालाई संकट आइपर्दा उनीहरूको पद जोगाउने अभियानमा चोकचौतारामा भेला भएर भाषण पनि गरेकै छन् । त्यस अलावा समाजमा रवाफ कायम गर्न सकिने ‘भाले कप फुटबल टुर्नामेन्ट’, नाचगानका सांस्कृतिक कार्यक्रम र पछिल्लो समय ख्याति कमाएका पर्यटन महोत्सवहरू आयोजनामा गर्नमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । यही हो कम्युनिस्ट आन्दोलन ? यसबाहेक केही भए, बृहत्तर समाजले त्यो थाहा पाएको छैन । कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको दस्तावेजका शब्दबाहेक कुनै गतिविधि पनि हुन् भने, सबैले देखेका र जानेका गतिविधि यिनै हुन् ।
दलित युवा अन्तरजातीय प्रेम गरेको निहुँमा लखेटेर मारिन्छन्, नेकपा नेतृत्वको कम्युनिस्ट आन्दोलन मारिएका युवालाई उल्टै दोष दिन्छ । प्रेम र जीवनविरुद्ध षड्यन्त्र रचिन्छन्, कम्युनिस्ट आन्दोलन कतै सुनिँदैन । नागरिकताको हकबाट महिलाहरू वञ्चित हुन्छन्, कम्युनिस्ट आन्दोलन ‘देश’ जोगाउन त्यसै गर्नुपर्छ भन्छ । राष्ट्रवादको छली पर्दा हालेर सत्ताका सारा नकाम छोप्न खोजिन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन मधेसलाई दुस्मन करार गरेर निहुँ खोजी बस्छ । सांस्कृतिक धरोहर भएका पुराना बस्तीमा कृषकबाट जमिन खोसेर सेना डोजर चलाउँछ, कम्युनिस्ट आन्दोलन सेनालाई स्याबासी दिन सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा उभिन्छ । प्राकृति जंगल फाँडेर सिमेन्टका खाँबा गाडिन्छन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनको सफलता त्यसैलाई मान्छ नेकपा । विकास र आर्थिक वृद्धिका नाममा चलाइएको पुँजीको अकण्टक चक्रले दलाल मात्रै उत्पादन गर्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन तिनै दलालको सेवामा सबैभन्दा बढी खट्छ ।
अहिले केपी ओली र माधव नेपालको चर्काचर्की पर्दा वा पुष्पकमल दाहाल ओलीसँग रिसाउँदा कार्यकर्ताहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनको सर्वनाश हुने भयो भनेर डराएका छन् । नेपाल र ओलीको आपसी सम्बन्ध बिग्रँदा, दाहालसँग बोलचाल बन्द हुँदा वा नेकपा फुटेर एमाले र नेकपा हुँदा सर्वनाश हुने गतिविधि तिनै हुन् जो माथि भनियो ? यी तमाम गतिविधिलाई नेतृत्व गर्ने स्वयं ओली, दाहाल र नेपालहरू नै होइनन् ? कम्युनिस्ट नाम गरेको कुनै आन्दोलन आवश्यक छ र त्यो आन्दोलन सकिँदै छ भने त यिनै गतिविधिकै कारण सकिँदै छ, होइन र ? नेपाली समाजको प्रगतिका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलन जीवित रहनुपर्छ भन्ने कसैलाई लाग्छ भने तिनले ओली र दाहालले कज्याएको संगठनको मोह त्याग्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।
रह्यो, केपी ओलीको राजीनामाको सवाल । सबै क्षेत्रमा पूर्णतया असफल भइसक्दा, आफैंले कबोलेको कुनै पनि काम पूरा गर्न नसक्दा र भ्रष्टाचारका घटना प्रमाणसहित पटकपटक सार्वजनिक भइसक्दा पनि कोही मान्छे प्रधानमन्त्री भएर बेसुरा गफ गरिरहन पाउँछ भने, मौजुदा व्यवस्थामाथि नै ठूलो प्रश्न खडा हुन्छ । यो व्यवस्थाको दीर्घजीवन चाहनेले विकल्प खोज्नु सामान्य घटना हो ।
प्रकाशित : असार १९, २०७७ ०९:५९
धादिङ — त्रिशूलीमा बिहीबार जिप खसेको भनिएको घटनामा थप तथ्य फेला नपर्दा प्रहरी अन्योलमा देखिएको छ । घटनासँग जोडिएका कोही सम्पर्कमा नआएको र जिप खसेको भन्ने बलियो प्रमाण नै नभेटिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
गोरखाको गण्डकी–६ की ६० वर्षीया सुनमाया तामाङले धादिङका जिल्ला प्रहरी प्रमुख रवीन्द्र रेग्मीलाई घटनास्थलमै दिएको भिडियो बयानमा उनले सेतो एम्बुलेन्सजस्तो देखिने जिप मुग्लिनतर्फबाट आएर त्रिशूलीमा खसेको दाबी गरेकी थिइन् ।
सुनमायाले करिब अढाई घण्टा हिँडेर चितवनको सिमाना मौवाखोला बजारमा आई गाडी खसेको भनी सुनाएपछि बिहान साढे ६ बजे जोगीमारास्थित प्रहरीले पहिलो सूचना पाएको थियो । उनका अनुसार बेनीघाट–१०, मौवाखोला, बाँदरे मोडबाट बिहान जिप खसेको थियो । यस्तो खबर पाएपछि नेपाली सेना, कुरिनटारस्थित सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर टोली खोजीमा जुटेका थिए ।
धमिलो पानी र तीव्र बहावका कारण खोजतलासमा कठिनाइ भएपछि बिहीबार गोताखोर फिर्ता गरिए पनि फेरि खोजी जारी राखिएको कुरिनटारस्थित सशस्त्र प्रहरीको तालिम शिक्षालयका प्रमुख कालिदास धौबजीले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म जिप कहाँबाट कता जाँदै थियो वा त्यसमा के–कति मान्छे थिए भन्ने विवरण खुल्न सकेको छैन ।
प्रहरीका अनुसार घटनास्थलमा कान्लामा माटो धस्सिएको, ढुंगा खसेको, स्थानीय बजारमा लगिँदै गरेको बिजुलीको एउटा तार चुँडिएको बाहेक अन्य ठोस प्रमाण फेला परेको छैन । ‘मुग्लिन बजारमा जडान गरिएको सीसीटीभी क्यामरा पनि बिग्रेपछि थप कठिनाइ भएको छ,’ धादिङ प्रहरी प्रमुख रेग्मीले भने । उक्त स्थानमा सडक सुरक्षाबार नरहेको र मोड पनि नभएकाले चालक एक्लै रहेको र निदाएको हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी चितवनतर्फका सबै प्रहरी एकाइलाई खबरसम्म गरिएको उनले बताए ।
प्रकाशित : असार १९, २०७७ ०९:५२